ဘေးကင်းလုံခြုံညစ်ညမ်းဂိမ်းအခမဲ့လိင်ဂိမ်းကစားသင့်ရဲ့နံပါတ်တစ်နှိုငျးဖြစ်ပါတယ်,ငါတို့ပဲဟုပြောကြသည်မဟုတ်။ ကျနော်တို့တကယ်တော့,ဝဘ်ပေါ်မှာအကောင်းဆုံးလိင်ဂိမ်းအချို့ကိုပူဇော်သက္ကာဘို့,အားလုံးရရှိနိုင်ပါသည်အကောင်းဆုံးအမ်ပီ၅ ဂရပ်ဖစ်အတွက်လာမယ့်. နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စုဆောင်းမှုသင်တစ်ဦးစုံလင်သောအွန်လိုင်းအော်ဂဇင်များအတွက်လိုအပ်အံ့သောငှါညစ်ညမ်းအပေါငျးတို့သအမျိုးအစားများမှလိင်ဂိမ်းများပါရှိပါတယ်။ ငါတို့သည်လည်းဧကန်အမှန်အသင့်ရဲ့စိတ်ကူးယဉ်နှစ်သက်လိမ့်မည်ဟုဆိုက်အပေါ်အများအပြားရှားပါးအမျိုးအစားများရှိသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုဒ်၏အကောင်းဆုံးအင်္ဂါရပ်မှာဤနေရာတွင်အရာအားလုံးလုံခြုံသောအချက်ဖြစ်သည်။ ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့နံပါတ်တစ်ရည်မှန်းချက်ဖြစ်ပါတယ်။, သင်ဘာမျှမအစဉ်အဆက်ထွက်ပေါက်ကြားသင့်ရဲ့ယုတ်အလိုဆန္ဒများရှိခြင်း၏အန္တရာယ်မှာသင်ထားမည်သေချာစေနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်လုံးဝအမည်မသိညစ်ညမ်းပူဇော်ရန်။ ကျနော်တို့ဆိုက်ပေါ်တွင်မှတ်ပုံတင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကစားသမားကိုမေးဘယ်တော့မှသူတို့ကျွန်တော်တို့ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုလာသောအခါသူတို့၏အိုင်ပီလိပ်စာမှတ်ပုံတင်ရန်ဘယ်တော့မှမ။
လုံခြုံညစ်ညမ်းဂိမ်းတွင်သင်သည်လည်းယခုအချိန်တွင်၏နောက်ဆုံးပေါ်ဂိမ်းများကိုတွေ့လိမ့်မည်။ ဒီစုဆောင်းမှုကိုအံ့သြဖွယ်ဖြစ်စေတဲ့အရာအားလုံးမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာလည်းတပြင်လုံးကိုအတှေ့အကွုံကိုပိုမိုသာယာသောနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်စေရန်အတူတကွလာသမျှသောအင်ဂျင်ပါပဲ။ သငျသညျခုန်ခြင်းနှင့်မြည်းကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်သည့်အခါသို့မဟုတ်အခါအသံအကျိုးသက်ရောက်မှုကလေးကယ့်ကိုသူတို့ကိုယ်သူတို့ပျော်မွေ့သို့မဟုတ်သင်သည်သူတို့၏တွင်းဆန့်သည့်အခါနာကျင်မှုခံစားနေကြတယ်နဲ့တူခံစားရပါလိမ့်မယ်။ ငါတို့သည်လည်းဒါကြောင့်အဆင့်မြင့်သင်ဂိမ်းများတွင်ချင်ယင်းမဆိုကြင်နာပြန်ဖွင်နိုင်ပါလိမ့်မည်စိတ်ကြိုက်မီနူးများပါ ၀ င်သောဂိမ်းများနှင့်အတူလာကြ၏။, သင်သည်အခြားကစားသမားများနှင့်အတူအပြန်အလှန်ပါစေလိမ့်မည်ဟုအသိုင်းအဝိုင်းကိရိယာများဆက်တိုက်အပါအဝင်ကဒီမှာသင်၏အချိန်ကိုခံစားစေမည်သောဤဆိုက်ပေါ်တွင်များစွာသောအခြားအင်္ဂါရပ်များရှိပါတယ်။ အားလုံးအမည်ဝှက်နှင့်အရာခပ်သိမ်းအပိုလုံခြုံ။
"ကျနော်တို့ဘေးကင်းလုံခြုံညစ်ညမ်းဂိမ်းအပေါ်အတူတကွထားကြောင်းစုဆောင်းခြင်းသင်ပင်သင့်ရဲ့ဘောလုံးသံခိတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်စွန့်ခွာမည်မဟုတ်ကြောင်းဤမျှလောက်များစွာသောမျိုးနှင့်စိတ်ကူးယဉ်အတူလာမယ့်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့အမှောင်ဆုံးနှင့်အရှုပ်ဆုံးမှချိုမြိန်ဆုံးနှင့်အသည်းအသန်ကနေစိတ်ကူးယဉ်ဘို့အရာအားလုံးရှိသည်။ သင်သည်ဂူးဂဲလ်အတွေ့အကြုံဂိမ်းများနှင့်ချိန်းတွေ့ခြင်းဂိမ်းများကိုကစားနိုင်ပြီး၎င်းသည်သင့်အားပြီးပြည့်စုံသောဆက်ဆံရေးနှင့်လိင်ဘဝကိုပေးလိမ့်မည်။ သငျသညျဤမျှလောက်အသေးစိတ်အတွက်ရှိသည်အိပ်မက်တွေကိုနှစ်သက်လိမ့်မည်ဟုစိတ်ကူးယဉ်ကွင်းကစားနိုင်ပါတယ်။, လိင်မှတပါးသင်ဤမျိုး၏စိတ်ကူးယဉ်အပေါငျးတို့သအခြားရှုထောင့်ကိုခံစားရလိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့်ဆရာ,ဆရာမ,ဆရာဝန်များနှင့်ပင်ရုံးချော့နှင့်အတူအားလုံးယူနီဖောင်းကစားသူအပေါင်းတို့သည်,ဤဂိမ်းအတွက်ဒါအစစ်အမှန်ခံစားရပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျဂိမ်းကစားခြင်းကိုကြိုက်နှင့်သင်၏ဂိမ်းအတွေ့အကြုံအတွက်အချို့သောညစ်ညမ်းချင်တယ်ဆိုရင်ကျနော်တို့တက်အဆင့်အထိနှင့်စုဆောင်းရန်ဟေးနှင့်အတူဖြည့်စွက်ရန်မစ်ရှင်နှင့်အတူဂိမ်းရှိသည်။ သူတို့ထဲကတချို့ကတကယ်တော့သင်ပြီးသားသိအံ့သောငှါဂိမ်း၏ရုပ်ပြောင်များမှာ,စစ်ပွဲ၏ကမ္ဘာ၏ဗားရှင်းနှင့်ပင်တစ်ဂူးဂဲလ်ညစ်ညမ်းဂိမ်း.
ရုပ်ပြောင်တွေကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်ကာတွန်း၊ကာတွန်း၊ကာတွန်း၊ကာတွန်း၊ရုပ်ရှင်၊တီဗီစီးရီးတွေအထိပါ ၀ င်ပြီးလိင်ဂိမ်းတွေရှိတယ်။ သငျသညျထိုကဲ့သို့သောအဲလျဆာ,ကင်မ်ဖြစ်နိုင်သမျှအဖြစ်ဘေဘီလေးကိုနိုင်,ကမ္ဘာ၏ဂိမ်းကနေပူပြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်ပေါ်တွင်နောက်ဆုံးပေါ်အနက်ရောင်မုတ်ဆိုးမညစ်ညမ်းဂိမ်းရှိသည်။ ထိုအခါငါတို့သည်သင်တို့ရှိစေခြင်းငှါလူအပေါင်းတို့သည်ညစ်ပတ်သောကျွဲများအတွက်ဇုန်ရှိသည်။ တချို့သောညစ်ညမ်းပရိသတ်တွေသူတို့ကိုထိုးစစ်တွေ့သောကြောင့်ဤဂိမ်းသတိပေးချက်နှင့်အတူလာမယ့်နေကြသည်။ ဒါပေမယ့်အမာခံနဲ့အစွန်းရောက်တွေအားလုံးလောက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဆိုက်မှာရှိတဲ့ညစ်ပတ်ပေရေနေတဲ့အညစ်ပတ်တွေအားလုံးကိုချစ်မိကြမှာပါ။
ကျွန်တော်တို့ဒီကိုပြေးတဲ့ဆိုက်ကကွန်မြူနစ်ဝါဒနဲ့တူပါတယ်။ သင်ဘာမျှမဆပ်ဖို့ရှိသည်နှင့်သင်သည်တစုံတခုကိုမျှရ။ သင်ပြုရန်လိုအပ်ပါတယ်တစ်ခုတည်းသောအရာသည်သင်၏ကြော်ငြာပိတ်ပင်တားဆီးမှုမှခြွင်းချက်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုထည့်သွင်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဤဂိမ်းများသည်ပေးဆောင်ရန်လိုအပ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့တွင်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းဆိုက်တွင်အလုပ်လုပ်သောအသင်းရှိသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်ပေါ်တွင်ပြေးကြော်ငြာတွေမဟုတ်တဲ့ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာသောဖြစ်ကြသည်။ သငျသညျထိုကဲ့သို့သောညစ်ညမ်းသို့မဟုတ်ကမ်ဘာပျေါတှငျကြီးတွေညစ်ညမ်းပြွန်ပေါ်ရထက်ဒီနေရာမှာလျော့နည်းကြော်ငြာတွေရ။ အဆိုပါဂိမ်းအတှေ့အကွုံကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်တွင်ကြားဖြတ်ဘယ်တော့မှလိမ့်မည်နှင့်ငါတို့သည်အခြားပလက်ဖောင်းရန်သင့်အားပြန်ညွှန်းဘယ်တော့မှမ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါတို့မှာညတိုင်းပိုပြီးပျော်စရာပြန်လာတဲ့မင်းလိုကစားသမားတွေရှိတယ်။, သူတို့ထဲကတဦးတည်းဖြစ်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဂိမ်းအားလုံးပျော်မွေ့!